Ungayigcina Kanjani Imbewu Yotamatisi Ngonyaka Ozayo - Imbewu
Ungayigcina Kanjani Imbewu Yotamatisi Ngonyaka Ozayo
Khetha Utamatisi Wakho Ngokuhlakanipha
Ungayomisa Kanjani Imbewu Yotamatisi
Ukonga Imbewu Yotamatisi Ngaphandle Kokubila
Isitoreji Sesikhathi Eside
Wake wazibuza ukuthi ungayilondoloza kanjani imbewu katamatisi? Sonke sibeka isikhathi esiningi ekukhuliseni izitshalo zethu esizithandayo kangangokuba kubonakala kuyihlazo ukujabulela kuphela lokho kuvuna kwenkathi eyodwa yokukhula. Noma ngabe ucabanga ukonga imbewu yetamatisi ye-heirloom noma cha, lo mhlahlandlela kufanele ukukusize ngazo zonke izici zokonga imbewu yetamatisi.
Kodwa ukonga imbewu kufanele kuqale kwenye indawo. Futhi isinyathelo sokuqala salokho ukuvuna imbewu katamatisi. Sizobuye futhi sisebenzise izindlela zokonga imbewu yetamatisi ngaphandle kokuyibilisa kanye nokubilisa imbewu katamatisi, ukuthi ungayomisa kahle kanjani, nokuningi.
Ngakho-ke uma ungathanda ukuqala ukonga imbewu yetamatisi minyaka yonke, lo mhlahlandlela kufanele ukukuhambise kukho konke ongakudinga ukukwazi!
Sinevidiyo enhle lapho uKevin eqhubeka khona nenqubo yokuvutshelwa noBrijette Romsedt weSan Diego Seed Company. Ungabona lokho lapha, futhi!
Hlobo luni lotamatisi olukhulayo, futhi yizinhlobo ezivulekile zempova?
Uma utshala utamatisi, imbewu evelayo yezinhlobonhlobo zikatamatisi izothuthukiswa ngokususelwa kulokho okumpova ezimbalini zesitshalo sabazali. Ake sithi konke okutshalayo yizinhlobonhlobo zamatamatisi wokunamathisela eSan Marzano. Ngisho noma izinyosi zingagcina zingcolisa impova ezitshalweni zakho, zizozala njengeTamatisi laseSan Marzano. Leyo impova evulekile enhlobonhlobo.
Kodwa izinhlobo ezivulekile zempova zingavotelwa impova ezinhlotsheni ezahlukene. Ake sithi unayo leyo San Marzano, kodwa futhi ukhulisa i-Cherokee Purple, umhla ka-4 kuJulayi, notamatisi ophuzi ophuzi. Manje lokho ngutamatisi owodwa wokunamathisela, isitaki esisodwa se-heirloom, isiki elilodwa lesaladi, nohlobo olulodwa lwe-cherry utamatisi. Lezo zingaphakanyiswa futhi yizinyosi zakho.
Isithelo esivelayo esivela kulawo ma-pollination asiphambano kungenzeka singafani nge-100% nesitshalo saso somzali. Isithelo uqobo sizonambitha njengalokho okutshalile, kepha imbewu kungenzeka ukuthi manje ithwele izici ezivela kwezinye izinhlobo. Le yindlela i-hybridization eyenzeka ngayo ezizukulwaneni eziningi zesitshalo.
Ukuze kuthuthukiswe utamatisi weqiniso, uzofuna ukunamathela ngohlobo olulodwa kuphela lwamatamatisi endaweni enikeziwe. Uzobe usuqinisa leyo genetics yolimo, futhi ngokuhamba kwesikhathi zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nesimo sezulu sakho esithile. Uma ungakhathazeki ngezinguquko ezingaba khona ngokuhamba kwesikhathi, imbewu enezimpova enqamulelayo isengakhula, futhi. Kepha ungahle uthande ukuthenga imbewu entsha njalo eminyakeni embalwa ukubuyela kwifomu le-truer.
Khetha kuphela utamatisi ohamba phambili, omkhulu kakhulu, onamanzi amahle kakhulu, futhi ahlaba umxhwele kakhulu ukuvuna imbewu yakho, bese umaka lawo kusengaphambili. Ngisebenzisa isiqeshana sentambo eboshwe sizungeze igatsha eliseduze notamatisi njengophawu. Ufuna ukuthi zivuthwe emvinini, futhi empeleni, ufuna ukushiya labo abasemvinini baze bavuthwe ngokweqile futhi babe ne-squishy kancane.
Ukukhetha kusengaphambili nokulinda laba abazobhapathizwa abaphambili kusho ukuthi uzothola imbewu kusuka kuleso sithelo esiphelele. Lokho kuqinisa amathuba akho okuthola izithelo eziningi njengalezo!
Khetha utamatisi ovuthiwe noma ovuthiwe okonga imbewu.
Ubuwazi ukuthi utamatisi unezinhlayiya zokuhluma ezungeze imbewu yabo? Leyo ngubo enezingilizi ezungeze imbewu katamatisi iyazivimbela ukuba ziqhume. Ngakolunye uhlangothi, lokho kusho ukuthi utamatisi wakho awuhlumi izithelo ezintsha emvinini. Kepha futhi kusho ukuthi ezinhlanyelweni ezihamba phambili, uzodinga ukukhipha leyo gel.
Indlela elula yokwenza lokho ngukubilisa imbewu yetamatisi. Lapho ijeli libola, imbewu ngaphakathi iyadedelwa bese kuba mahhala ukuqhuma. Izinhlobonhlobo zamatamatisi kufanele zivutshelwe zodwa, zingaxutshwa nembewu evela kwezinye izinhlobo.
Qala ngokugeza kahle utamatisi wakho ukuze ususe noma ikuphi ukungcola okungaba ngaphandle kwesithelo. Kunciphisa amathuba okuthola noma yimaphi amabhaktheriya asemhlabathini athelele imbewu yakho. Uma zihambe zithambe ngempela, qaphela ukuthi ungazivezi zivuleke uma wenza lokhu.
Manje sekuyisikhathi sokuxoxa ngendlela yokuvuna imbewu katamatisi. Sika utamatisi kahle ngesigamu noma emakamelweni ubude bude eduze kwesithelo. Ngemuva kwalokho, ubambe isiqu sikatamatisi, sebenzisa isandla sakho ukukhama imbewu nezithelo zomuthi phansi ezitsheni. Nikela ngezimbalwa zalamatamatisi avuthwe ngokweqile ukuze ukhame ujusi, nawo. Le jusi izosheshisa inqubo yokuvutshelwa. Noma yikuphi okusele, inyama yenyanya yetamatisi engenakonakala inganqanyulwa futhi isetshenziswe njengotamatisi oswidi.
Faka ujusi wakho katamatisi, imbewu, nejeli embizeni yamasoni elingana nelitha. Ngokufanelekile, kufanele kube nejusi eyanele lapho ukuze ijeli lehlukaniswe nembewu ngoketshezi oluthile lapho ukuvutshelwa sekuphelile. Uma engekho, ungafaki amanzi, ngoba ukuxuba ijusi empeleni kuzonciphisa inqubo yokuvutshelwa.
ibhulashi enhle kakhulu yezinwele ezi-wavy
Lapho isivalo sesisembizeni, sinikine kahle bese usibeka endaweni eyi-70 degrees Fahrenheit noma ngaphansi. Kanye noma kabili ngosuku, yinikine kahle ukuzama ukukhipha imbewu ejel. Qiniseka ukuthi uvula imbiza okungenani kanye ngosuku ukuze “uyibhodloze”, uvumele noma yimaphi amagesi avela enqubeni yokuvutshelwa ukuba abaleke. Kunganuka kabi, kodwa ungakuvumeli lokho kukukhathaze. Yenza lokhu okungenani izinsuku ezintathu kuze kube yisonto.
Ekupheleni kwenqubo yokuvutshelwa, engeza cishe inani eliphindwe kathathu lamanzi embizeni, yinike okunye ukuzamazama, bese ikuvumela ukuthi ihlale ihora noma ngaphezulu. Iningi lembewu esebenza kahle kufanele liwele phansi kommbila, futhi ungqimba lwe-gooey gelatinous kufanele luntante ngaphezulu. Sebenzisa isipuni ukukhipha ungqimba lwejel bese uyilahla.
Thela amanye amanzi e-pulpy amaningi, engeza amanzi amasha, unyakazise, ​​bese uphinda le nqubo yokugcina yokukhipha futhi kuze kube yilapho amanzi ebukeka ecacile. Ngaso sonke isikhathi, yinike isikhathi esanele sokuxazulula, kuthi imbewu esebenza kahle iwele ezansi kuthi lezo ezingaphumeleli zintanta, bese ukhipha udoti. Lapho amanzi esecacile, lahla okuqukethwe kusisefo esihle semesh bese ukugeza kahle.
Uma wenza imbewu eningi, ungasheshisa inqubo yokuhlanza ngokukhipha i-gel yokuqala, ulahle konke okunye esikrinini esikhulu noma kusihluzi esikhulu semesh, bese usifafaza ngejethi enzima yamanzi. Imbewu ngeke idlule esikrinini noma kusihluzi, kepha noma iyiphi i-gunk eyinsalela izokwenza.
Abanye abantu okwamanje bakhetha ukwelapha imbewu ukuvimbela ukudluliselwa kwanoma yiziphi izifo. Lesi sinyathelo siyakhethwa, kepha kuyanconywa uma uhlela ukwabelana ngezimbewu nabanye.
Ukwelapha imbewu, yenza isisombululo se-10% se-bleach (ingxenye eyi-1 yeblitshi ibe izingxenye eziyisi-9 zamanzi) bese ucwilisa imbewu imizuzu engama-30. Sulahla imbewu ngokushesha ku-strainer bese uyihlanza ngaphansi kwamanzi abandayo abandayo okungenani imizuzu engu-7, uvuse njalo noma uhlukumeze imbewu ukuze uqiniseke ukuthi igeziwe ngokuphelele. Uma usugezile okungenani imizuzu engu-7, qhubekela phambili ukomisa.
i-ponytail eboshwe emuva
Kungani imizuzu eyisikhombisa kuya kweyisishiyagalombili yokunyakaza njalo ngaphansi kwamanzi agobhozayo? Ngoba lokhu kwehlisa inani le-chlorine eyinsalela kusuka ku-bleach iye ngaphansi komngcele weNational Organic Program. Ama-chlorine asalayo enzalweni kufanele abe ngaphansi kwezingxenye ezine kwisigidi ngasinye ukubheka imbewu ephilayo.
Bilisa imbewu ngejusi yabo.
Sidinga izimo ezipholile, ezinomoya omuhle ukomisa imbewu yethu katamatisi. Uma kushisa kakhulu, njengamanzi okuphelisa amanzi emzimbeni noma eminye imishini efanayo, ingapheka imbewu katamatisi futhi iyenze ibe yinyumba. Leyo yinto yokugcina esifuna yenzeke!
Ungashiya imbewu yakho katamatisi ngaphandle endaweni eyomile. Uma wenza kanjalo, ngincoma ukwenza ifreyimu yokomisa ngokhuni ngezingcezu ezimbalwa zokhuni ezilahliwe kanye nesikrini esidala sewindi. Sebenzisa isibhamu esiyisisekelo ukunamathisela isikrini kufreyimu. Ungabe usakaza imbewu yakho kulokho bese uyibeka endaweni eyomile enomoya omuhle.
Uma ungafuni ukwenza ifreyimu yokoma, ungabeka isiqeshana sephepha lesikhumba ebhodini lokubhaka bese ufaka imbewu yakho kulokho. Kuzothatha isikhashana ukuthi zome ngale ndlela, kepha zisazoma ngokuhamba kwesikhathi. Abanye abantu baze basebenzise ipuleti lephepha ukwenza lokhu, kepha ngepuleti lephepha, bangabambeka ngaphezulu futhi kungahle kube nzima ukususa. Njengoba iphepha lesikhumba liguquguquka kalula, kufanele ukwazi ukuligoba bese uvula imbewu enamathele khona lapho.
Nsuku zonke noma ezimbili, kuzodingeka ufike uvuselele imbewu yakho ukuze uqiniseke ukuthi zonke ziyoma ngokulinganayo. Hlukanisa izigaxa ezinamathela ndawonye ngeminwe yakho, noma uzigcobe ezandleni zakho zize zihlukane.
Kukhona enye indlela yokomisa imbewu ngaphandle kwe-hea. Sebenzisa umshayeli webhokisi nezihlungi zomoya ezingabizi kakhulu, kanye nezintambo ezimbalwa ze-bungee. Lapho inqubo yokuvutshelwa isiqediwe, gcina imbewu yetamatisi phakathi kwalezo zihlungi, ziboshelwe kufeni. Umlandeli uzophoqa umoya opholile ngokusebenzisa imbewu bese uyomisa ngokushesha okukhulu kunokuthi ngabe belele nje endaweni emile.
Ukwazi ukuthi ungonga kanjani imbewu yetamatisi kukwenza ukwazi ukuyikhulisa minyaka yonke.
Kungenzeka ugcine imbewu yetamatisi ngaphandle kokuvutshelwa. Ekugcineni, ukumbozwa kwejel kuzokwehla ngokwakho, yingakho kungenzeka ukuthi utshale isinqamu sikatamatisi onamanzi bese uthola amahlumela. Le ndlela yinhle uma uzigcinela nje izimbewu ezimbalwa futhi ungahleleli ekwelapheni imbewu ukuvimbela ukusabalala kwezifo.
Ngale ndlela, uzodinga amathawula wephepha, ama-tweezers, notamatisi wakho omusha ozikhethelayo. Sika uvule utamatisi bese ukhipha imbewu uyifake esitsheni. Ngama-tweezers akho, thatha imbewu ngayinye kanye ne-goatin yabo ye-gelatinous bese uyicindezela ethawula lephepha, uqiniseke ukuthi uyayikhipha. Beka la mathawula wephepha kwenye indawo emnyama, epholile, futhi enomoya omuhle ukuze imbewu yome ngokuphelele.
Uma isomile, imbewu izonamathela kuthawula lephepha. Ungasonga ithawula uligcinele isikhathi esizayo, futhi ungabhala ngisho nezinhlobonhlobo zembewu ethawula uma ufuna. Uma kufika isikhathi sokutshala ngonyaka ozayo, usike noma unqume izingxenye ezithile zembewu yethawula netamatisi zokutshala. Ithawula lephepha lizodiliza futhi imbewu izohluma.
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ukusebenzisa le ndlela kusho ukuthi awehlisi amathuba akho okusabalalisa izifo. Njengoba ufaka ijeli elomisiwe ezimbewini ezingahanjiswanga, kunengozi encane uma kukhona utamatisi wakho obugcina isifo esingahle sibe khona. Kodwa ingozi incane impela uma ngabe ubengenasifo.
Indlela yethawula lephepha iyindlela yokonga imbewu engavutshelwa.
Amagama amathathu asebenza ekugcineni imbewu yakho yetamatisi: kubanda, komile futhi kumnyama.
Awudingi ukubamba imbewu yakho, ngoba utamatisi awudingi ukubanda okungako. Kepha bayayithanda ipholile ngokuya ngezinga lokushisa. Lwela ibanga lokushisa elingu-40-60 uma kungenzeka, kodwa ungethuki uma indlu yakho ivame ukuba ngama-degree angama-70, lokho kuzolunga futhi.
Ukugcina imbewu yomile kubalulekile. Umswakama uyadingeka ukuze uhlume, kanti imbewu yakho katamatisi izokuhluma ngenjabulo ebumnyameni uma ikwazi ukufinyelela umswakama. Ngithanda ukugcina okwami ​​esitsheni esingangeni moya, ezimvilophini zamaphepha ezinephakethe lesilica elimunca umswakama phakathi kwazo.
Ekugcineni, ubumnyama buvimbela nokuhluma kokuqala. Ngenkathi imbewu ingadingi ukukhanya ukuze ihlume, noma yikuphi okufinyelela ukufudumala nomswakama kusengenzeka. Kepha uma kungekho umswakama noma imfudumalo, ubumnyama bulungele ukugcina isikhathi eside.
Sinezeluleko eziningi zokujula ezijulile zezinhlobonhlobo zezimbewu ku i-athikili yokugcina imbewu .
Ngakho-ke yindlela yokulondoloza imbewu yetamatisi ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Manje usungaqala ukuqoqa imbewu katamatisi ezitshalweni ozithandayo bese ugcine isivuno siqhubeka unyaka nonyaka!
izipho zomama zosuku lomama
kungani i-polyamory ingasebenzi
cwilisa impuphu kuzipikili zemvelo ezimfushane
izitayela zokuluka izinwele zase-african izithombe 2020 ngobuhlalu